सरकारले घटायो डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य, प्रतिलिटर कति ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
सरकारले घटायो डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य, प्रतिलिटर कति ?
१९ जेष्ठ २०७९ बिहीबार २०:२७
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको मूल्य घटाएको छ । बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा १०-१० रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रूपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्य १५३ रूपैयाँ पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पुर्वाधार कर घटाएर गरेर मूल्य समायोजन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि यस्तो निर्णय भएको प्रवक्ता उपाध्ययले बताए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर घटाएपछि मूल्य समायोजन भएको हो । बजेट वक्तव्यमार्फत नै सरकारले पेट्रोलमा लगाएको कर घटाउने घोषणा गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढ्दै जाँदा उच्च दरको करका कारण मूल्य पनि आकासिएको थियो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला प्रतिलिटर इन्धनमा पूर्वाधार कर समेत जोडेर लिन सुरु भएको थियो । त्यसलाई हटाउन माग हुँदै आएपनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
खाना पकाउने ग्याँस र हवाई इन्धनको मूल्य भने घटेको छैन। त्यस्तै, नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट हिजो मात्रै इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । जसअनुसार पेट्रोलमा बढेर नयाँ मूल्य आएको छ भने डिजेल, खाना पकाउने ग्याँस र हवाइ इन्धनमा घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार आइओसीले नयाँ मूल्य पठाएसँगै निगमलाई आगामी १५ दिनमा करिब तीन अर्ब ७ करोड पचास लाख रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। आइओसीले पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२.९३ रूपैयाँ र डिजेलमा १९.७३ रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। हाल नेपाली बजारमा पेट्रोल लिटरको एक सय ८० र डिजेल एक सय ६३ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल खरिद लागत भने २०२.९३ रूपैयाँ र डिजेलको १६३ रूपैयाँ पर्छ। त्यस्तै प्रतिसिलिन्डर एक हजार ८ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई ७५१.१४ रूपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। ग्यासको खरिद लागत २५५१.१५ रूपैयाँ छ।
निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा लिटरको १५.०८ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७.३६ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.५७ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ। अहिले मट्टीतेलको खरिद लागत १४७.९२ रूपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फको १४८.६४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फको १२७.८३ रूपैयाँ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नयाँ मूल्यसँगै मासिक ६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको छ। नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। मूल्य घटाउन माग गर्दै प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। सरकारले यसपालिको बजेटमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने घोषणा पनि गरेको छ।